Ny beta fahadimy an'ny macOS High Sierra 10.13.6 ho an'ny mpamorona dia efa misy | Avy amin'ny mac aho
Manohy mandray kinova beta izahay ary Apple natomboka minitra vitsy lasa izay kinova beta fahadimy an'ny macOS High Sierra 10.13.6 ho an'ny mpamorona. Ny orinasa dia namoaka ihany koa ny kinova beta fahadimy an'ny iOS 11.4.1 ho an'ny mpamorona.
Amin'ity tranga ity dia ny mahazatra Fanatsarana ny fahombiazan'ny kinova, fanamboarana bug ary fanatsarana ny fitoniana an'ny kinova. Amin'izao fotoana izao, tsy mino izahay fa ho ela loatra izy ireo handefa ny kinova farany amin'ity kinova ity, ny beta teo aloha dia natomboka tamin'ny 25 Jona ary amin'ity tranga ity dia tsy manantena betas be loatra ho an'ny kinova izay somary milamina sy na izany na tsy izany dia hanana kinova hafa hafa ao ambadiky ny famoahana ny Mojave.
Ireo kinova ireo dia azo zahana tanteraka ho an'ny mpamorona. Araka ny nolazaiko foana tamin'ireto tranga ireto, ireo kinova beta rehetra ho an'ny mpamorona dia mety misy bibikely ary noho izany dia tsara kokoa ny mijanona tsy lavitra amin'ny lalana ary manalavitra ireo mety tsy fahombiazana ao amin'ny Mac, miaraka amina fampiharana na fitaovan'ny asa. Ka raha tsy mpamorona ianao dia ny toro-hevitra dia izay avelao ireo mpamorona ny beta ary andraso sao hivoaka afaka adiny vitsy ny kinova ampahibemaso amin'ity beta ity.
Apple dia mahatoky hatrany amin'ny tempos ary manohy manatsara sy mampifanaraka ireo kinova izay hijanona ao amin'ireo Mac tsy afaka manavao ny macOS Mojave, noho izany dia zava-dehibe ny manitsy sy mamaha ny olana rehetra izay hita ao amin'ireo kinova ankehitriny. Amin'izao fotoana amin'ity volana sy volana aogositra ity dia tsy maintsy mandalo alohan'ny hanombohana amin'ny fomba ofisialy Mojave, araka izany misy fotoana betsaka hanamboarana bibikely sy hanomanana an'ity macOS High Sierra ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » High Sierra macOS » Ny beta fahadimy an'ny macOS High Sierra 10.13.6 ho an'ny mpamorona dia efa misy izao
Ahoana ny fomba hampiasana ny Siri nefa tsy miteny hoe "Hey Siri" miaraka amin'ilay fampiasa "Asandrato hiresaka" vaovao ao amin'ny watchOS 5 beta
Apple TV 4K izay latsaky ny 160 euro